कर्णाली विवादबारे ओलीले एकलौटी निर्देशन दिएपछि प्रचण्डले दिए अर्को निर्देशन ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कर्णाली विवादबारे ओलीले एकलौटी निर्देशन दिएपछि प्रचण्डले दिए अर्को निर्देशन !
कात्तिक ८ गते, २०७७ - ०८:२७
ओली पक्षका सांसद यमलाल कँडेलको अगुवाईमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्द अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि विवाद झन बल्झिएको थियो । दुवै अध्यक्षले काठमाडौं बोलाएर कर्णालीका मुख्यमन्त्री लगायतका नेताहरुलाई भेटेका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा नेपाल पक्ष र पुर्व माओवादीका ३ सांसदको साथ लिएका कँडेलसँग अहिले ओली पक्षका बाहेक अन्य सांसदले साथ छोडेका छन् भने ओली पक्षसँग रहेको सचेतक पदसमेत गुमेको छ ।
कात्तिक ८ गते, २०७७ - ०८:२७ मा प्रकाशित